Muxuu yahay muranka u dhaxeeya Somaliland iyo dowladda Seychelles? - Jigjiga Online
HomeSomalidaMuxuu yahay muranka u dhaxeeya Somaliland iyo dowladda Seychelles?
Sida laga soo xigtay wakalaada wararka Seychelles, dowladda ka arrimisa Jasiiradda Seychelles ayaa dhaleecaysay sii daynta 19 burcad-badeed ah oo lagu xukumay jasiiradaad, isla markaana loo wareejiyay Soomaaliland si ay u dhamaystirtaan xukunnadooda.
Wasaaradda arrimaha dibada Seychelles ayaa muujisay inay si weyn uga carootay tallaabada ay qaadeen mas’uuliyiinta Somaliland..
Soomaaliland ayaa sii daysay maxaabiistan inta u dhaxaysa 30.36, iyo 42 sanno oo xabsi burcad-badeednimo
Sannadkii 2011 ayaa labada dhinac waxay wada gaareen heshiis is fahan ah oo dhigayay in la isdhaafsado dhaafsado maxaabista si ay ugu dhamaystaan xukunkooda Somaliland gudaheeda.
Hase yeeshee, Somaliland ayaa dhankeeda ku adkeysanaysa inay sifo sharci ah u martay siideynta 19 maxbuus oo burcad badeednimo ugu xirnaa xabsiga magaalada Hargeysa, kuwaasoo dhammaadkii bishii Luulyo uu cafis u fidiyay madaxweyne Muse Biixi Cabdi.
Dowladda Seychelles ayaa horay u sheegtay in Somaliland ay si aan sax ahayn usii daysay maxaabiistaasi, oo qaarkood ay ku xukunnaayeen sanado badan.
Arintan ayaa la sheegay in mar kale lagu soo qaaday kulankii wadamada Afrika iyo Japan ay todobaadkii hore ku yeesheen magaalada Yokohama.
Garyaqaanka guud ee Somaliland Cabdisamad Cumar Maal ayaa BBC-da uga warramay hannaanka sharci ee ay u mareen siidayntaasi iyo cadaadiska ay kula kulmeen.
”Sharciyada la xariirta sii daynta maxaabiistan waa mid waafaqsan heshiiskii is afgaradaka ahaa ee u dhaxeeyey Somaliland iyo Seycelles iyo xeerka wareejinta maxaabiista Somaliland ee la hirgaliyay sannadkii 2012-kii, qodobadaas ayey waafaqsan tahay tallaabada sii daynta maxaabiista ay Somaliland qaaday” ayuu yiri garyaqaan Cabdisamad Cumar.
Waxaa jira goobo kale oo kamid ah Soomaaliya, sida Puntland oo ay ka dhisan yihiin xabsiyo lagu hayo burcad-badeed laga keenay wadamo kale si ay ugu dhamaystaan mudooyinka lagu xukumay.
Maxaabiis badan oo Soomaali ah ayaa ku xidhan waddamo badan oo caalamka kamid ah, maxaabiistan ayaa qaarkood ku xukuman yihiin xabsi daa’in.
Seychelles oo ah Jasiirad ku taalla bariga Afrika ayaa kamid ah wadamada ugu horreeyay ee heshiis is afgarad la galay Soomaalilnd si loogu soo gudbiyo maxaabiista loo qabto falalka burcad-badeednimada.
“ La Kulan Qoraa Soomaaliyeed Faarax Lamaane” oo idiin soo Bandhigi Doono Waxa ay ka Dhigantahay in wax la Qoro